onlineakhabar.com: LEAKED: ऋितिक र कंगनाको सबैभन्दा गोप्य तस्विर लिक..
Bollywood News, Entertainment, Hrithik Roshan, India News, International, Kangana » LEAKED: ऋितिक र कंगनाको सबैभन्दा गोप्य तस्विर लिक..
LEAKED: ऋितिक र कंगनाको सबैभन्दा गोप्य तस्विर लिक..
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौत र ऋतिक रोशनको विवाद फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ । यि दुईको झगडा समाप्त हुनुभन्दा पनि अझ बढ्दै गइरहेको छ । कंगना ऋतिकसँग आफ्नो नजिकको सम्बन्ध भएको दावा गरिरहेकी छन् भने ऋतिक यो कुरालाई अस्विकार गरिरहेका छन् । हालै यी दुई जोडिको एउटा तस्विर अगाडी आएको छ जुन फोटोले ऋतिकलाई नै प्रश्नको घेरामा राखेको छ ।
यी दुईको गोप्य तस्विर लिक भएको छ जसमा यि दुइ एक पार्टीमा एकै साथ रमाइलो गरिरहेको देखिएको छ । तस्वीरमा ऋतिक रोशन निकै रोमान्टिक मुडमा देखिएका छन् । दुबैजना एकआपसमा निकै नजिक भएका छन् । यो तस्विर भारतिय मिडिया एबीपी न्यूजको ले राखेको छ । यो तस्विरले यिनिहरुको सम्बन्धका बारेमा धेरै रहस्य खोलेको छ । आखिर यिनिहरुको प्रेम सम्बन्धबारे के हो त? यो तस्विरलाई देख्दा अहिले सम्म ऋतिकले जे बोले त्यो सबै झुठो त होइन? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उठीरहेको छ ।
यो तस्विर बारे सत्य जान्नको लागि ऋतिक रोशन सँग सम्पर्क गर्ने कोशिस गर्दा समेत कुनै रेस्पोन्स नमिलेको भारतिय न्यूज च्यानल एबिपीले जनाएको छ । तर अन्य जानकारीका अनुसार यो तस्विर अर्जुन रामपालको पार्टीको हो । कंगना र ऋतिकले एकै साथ दुई फिल्म गरेका थिए त्यस समयमा प्राय पार्टीहरुमा यि दुबै सँगै देखिन्थे ।
Tags : Bollywood News Entertainment Hrithik Roshan India News International Kangana